UCTU-FTAR: Mitaky ny hanafoanana ny fanomezana ny OMAVET ny fanaovana “contre-visite”. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE UCTU-FTAR: Mitaky ny hanafoanana ny fanomezana ny OMAVET ny fanaovana “contre-visite”.
UCTU-FTAR: Mitaky ny hanafoanana ny fanomezana ny OMAVET ny fanaovana “contre-visite”.
By Nirinasept 07, 2017, 07:11 0
Tsy mankasitraka ny fanomezana ny fanaovana ny “contre-visite ” ho an’ny orinasa tsy miankina OMAVET ny fikambanan’ny fitateram-bahoaka an-drenivohitra (UCTU) sy ny fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra (FTAR). Nambaran’ny Filohan’ny FTAR, Clémence RAHARINIRINA fa tsy nisy akory ny fangatahana ny hevitry ny fikambanana tamin’ny fandraisana izao fanapaha-kevitra izao. Araka ny fanazavan’ny Filohan’ny UCTU, Bernadin fa miteraka fatiantoka ho an’ny mpitatitra ny fandraisana io fanapaha-kevitra nataon’ny mpanolontsainan’ny tanana tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana io.
Noho izany, mitsipaka ny fanaovana ny fitsirihana ny fiara ao anatin’ny ora iray, ny fanarahana ny teboka 104, ny fandoavana ny saram-piantohana efa-bolana… ny fikambananan’ny fitateram-bahoaka sy ny taxi an-drenivohitra.
Manome fe-potoana roa herinandro an’ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra (CUA) ny roa tonta hanafoana io fanapaha-kevitra io. “Mety hiafara amin’ny fitokonana izany rehefa tsy tanteraka”.
Nomarihin’ireto fikambanana ireto fa ny 90% ny vola miditra dia ny ho an’ny orinasa OMAVET. Ny 10% kosa ho an’ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra (CUA).
Previous PostSALON DES ETUDES SUPERIEURES : Manana safidy maro ny mpianatra. Next PostONIVERSITE GSI: Manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana.